हामी त खञ्चुवा मात्र भएछौं । « janaaasthanews
प्रकाशित मिति : ५ फाल्गुन २०७५, आईतवार १६:०३
–दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, नेपाल राष्ट्रबैंकका पूर्वगभर्नर
देशको आर्थिक परिचालनको स्थितिमाथि अहिले प्रश्न उठिरहेको छ । राजस्व लक्ष्य पूरा नहुने पुरानै रोग बढेको छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबद्र्धन गर्ने सरकारको नीति ठीक उल्टोसँग अगाडि बढेको छ । अर्थात्, निर्यात ठप्पप्रायः र आयात आकाशिँदो छ । यस्तै सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्रबैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले केही विश्लेषण गरेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष पनि भएका उनी माओवादीसँग निकट भएका कारण गभर्नर भएको मानिन्छन् । अहिले तत्कालिन माओवादी पनि एक भएर बनेको नेकपाको सरकार छ । तर, आर्थिकस्थिति निराशजनक भएकै ठहर छ, उनको ।
बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कर्मचारी समायोजन भएर त्यहाँ पुग्न सकेका छैनन् । यस्तो अन्योलका कारण हाम्रो विकास धरापमा परेको अनुभति भएको छ । यद्यपि, परिवर्तनपछि केही आशातित कुरा भएको छ, जस्तो कि पर्यटक ११ लाख आए । यसैबाट हौसिएर २ वर्षमा २० लाख पर्यटक भिœयाउने भनेका छौँ । मूल्यवृद्धि पहिला ८ को बिन्दुभन्दा माथि पुग्थ्यो, अहिले ३ दशमलव ७ प्रतिशतले झरेको छ । यद्यपि, बजारमा हामी त्यो अनुभूति गर्न सक्दैनौँ । हाम्रो ध्यान मसिनो चामलतिर गयो, जुन आयात गर्छौं । रेडिमेट कपडा लगाउन थाल्यौँ । रेष्टुराँमा खान जानेको संख्या बढ्यो ।
– अर्थमन्त्रीले नै पुँजीगत खर्च नभएर हाम्रो समग्र अर्थतन्त्रलाई खासै असर पार्दैन भन्नुभयो । पुँजी खर्च नहुने हो भने विकास खर्च, चालू खर्च किन छुट्याउनु ? किन टाउको दुखाउनु ? जग्गा सरकारीकरण गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति आयो । तर, खण्डन आएन । ‘हो र’छ कि’ भन्ने भयो । शेयर बजारमा उहाँले भन्न खोजेको ठीक थियो । तर, शव्दावलीको चयन तलमाथि पर्नाले ओरालो लाग्यो । अहिले त उहाँ मन्त्री हो, पहिलाजस्तो कर्मचारी हैन नि † उहाँका शव्द–शव्दले महŒव राख्ने बेलामा बोलि मिलाउनुपथ्र्यो ।
– आयाततर्फ हेर्ने हो भने विलासी सामानमै हामी अल्मलियौँ । माथि–माथि पुग्नुभएका नेताहरु बढा दुख पाएर त्यहाँ पुग्नुभएको त भनियो, तर उहाँहरुले मोवाइल÷ट्याबलेट ल्याउने † पाँच लाख घटीको नबोक्ने † एउटैले तीनवटासम्म कार प्रयोग गर्ने † नजिक बस्नेले सकेर भए पनि, नसकेर भए पनि देखासिकी गर्ने नै भए । उनीहरुलाई खुशी पार्ने व्यापारीले यस्ता बस्तु एक दुईवटा उपहार दिने † त्यो प्रयोग गरिसकेपछि वा उसले प्रचार गरेपछि उसका चम्चाहरुलाई पनि यस्ता बस्तु नभई नहुने भयो । त्यही कारण व्यापारीहरुले यस्ता बस्तु ल्याउने भए । यही कारण आयात बढ्दै गयो ।
रेमिट्यान्स पनि घट्दै गयो । यस्तो भएपछि शोधान्तर घाटा बढ्ने नै भयो । अब हामीले विचार गर्ने पर्ने पक्ष, मितव्ययी बन्न पर्ने हो कि ? वेल्ट कस्नुपर्ने हो कि ? परिवर्तित सन्र्दभमा हामी सबै श्री ५ भयौँ । हिजो श्री ५ लगाउने एक जना मात्र थिए । आज दुई करोड ८९ लाख पुग्यौँ । त्यही कारण कसैले कसैको कुरा सुन्न पनि परेन । हाम्रो अर्थतन्त्र बेलगामको रुपमा अग्रसर भएर अगाडि गयो । वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार र ट्रान्सफरसमेत घाटामा गयो । हामी खञ्चुवा भयौँ । हामीसँग प्रर्याप्त केही रहेनछ । बाहिरबाट आएकोले असिना–पसिन बनाउँदो रहेछ भन्ने देखियो । अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छनक देखिरहेको छु ।
– तरलताको अभाव होइन भनेर केन्द्रीय बैंकले भनेन † हो भने त भन्नुपर्छ नि † माघ २२ को तथ्यांक हेर्दा ३४ अर्ब रुपैंया सर्कुलर छ, बजारमा । पाँच अर्ब बराबरको रिपो केन्द्रीय बैंकले जारी ग¥यो । बैंकहरुले लैजाने बेलामा तीन खर्ब ६० अर्ब उठाए । एब अर्ब ४० करोड बाँकी रह्यो । यदी हामीले भनेझैं तरलताको अभाव भएको भए यी परिस्थिति अर्कै हुन्थ्यो । सबै बैंकमा तरलताको अभाव होइन । सरकारी बैंक यसबाट उन्मुक्त हुन्छ । सिसिडी रेसियो, निक्षेप र लगानीको अवस्था पनि राम्रो छ । हतोत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन । तर, केही बैंकलाई दुई अर्बबाट आठ अर्ब पुँजी पु¥याउन निर्देशन दियो, केन्द्रीय बैंकले । त्यो पूरा गर्ने क्रममा छोटो समयमा पुँजी वृद्धि गर्नैपर्ने भयो ।
लगानी गर्ने मान्छेलाई जति माग्न आँउछन्, त्यति लगानी गरिदियो । तर, त्यही तुलनामा निक्षेप संकलन हुन सकेन । त्यसो हुँदा निक्षेप भन्दा लगानी बढी हुन गयो । धनगढी, विराटनगर, भैरहवालगायतका क्षेत्रमा उद्यमी व्यवसायीहरु बैंककै विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रिए । बारम्बार आइरहने तरलताको अभाव भएरै त्यसो भयो । तर, केन्द्रीय बैंक समस्या होइन भन्छ ।